Best 24 Feather Tattoos Design Maonero Kwevarume nevakadzi - Tattoos Art Ideas
Best 24 Feather Tattoos Design Mazano Kune Varume nevakadzi
Tatiro dzakanaka zvinhu zvefashoni izvo zvose varume nevadzimai vari kuchinja zvimwe zvikamu zvemitumbi yavo. Paunenge uine chimiro chikuru, vanhu vachachida uye vanochikoshesa. Iwe zvechokwadi unoda mapepa emheto paunovaona.
Feather tattoo inogona kureva pfungwa yekusununguka nokuti inosanganiswa ne shiri. Shiri dzinofungidzirwa semhuka dzisununguko uye ndicho chikonzero ivo vanogona kubhururuka kubva kune rumwe rutivi rwepasi kune rumwe. Mhemberero imwe chete kana iyo yakawanda inogona kutaura pamusoro pekutsvaga rusununguko. Uyewo, #feather zvakafanana zvinotaura pamusoro pechinhu chekufamba, mazano, kukwanisa kuwirirana nekuchenjera. Mhemberero dzinogona kureva avo vakapfuura, kubatana nevakafa.
Feather tattoos mamwe emhando dzakanakisisa dzekuti iwe unogona kuona zvakapoteredza. Iko isiri uye inokosha. Haasi munhu wese waunoona aya mavara. Paunenge uchitsvaga a #nyora kuronga kuti utsvake rusununguko rwako,, iyo tattoo inongova imwe chete yekuenda nekuda kwekunaka uye kukosha. Zvinomirirawo zvipo zvinowira kubva kudenga. Nhepfenyuro dzinorevawo Rusununguko, Chokwadi, Chiedza, Kachimbidzika, Kukwira, Kurwisana, Mhepo Yakakwirira, Nharo, Kururama, Ushingi, Vimbiso, Ushingi, Tariro, Kutaurirana kune rimwe divi, Rwendo rwemweya, Kutamba, Muchenjeri, Kurapa uye Kuora. Ma Tattoos akanyatsogadzirirwa kukupa iyo chizivo chaunoda. Kune marudzi akasiyana-siyana ematoto ayo unogona kushandisa mukuchinja maonero aunoita.
1. Lovely feather tattoo pfungwa pamusoro pevakadzikadzi
Wati wamboona rudzi urwu rwembambo here? Vakawanda vevakadzi vanoshandisa sendima iyi yepineti nokuti yakanaka uye inewo yakasiyana-siyana.
2. Mifananidzo yakaisvonaka inonzi tattoo kugadzirwa pamaoko
Iko hakuna chikamu chemuviri wausingagoni kuichengeta. Zvisinei, tinofanira kukuudza kuti iwe unofanirwa kuziva zvinorehwa neshoko raunoda kushandisa.
3. Nyeredzi dzinobwinya uye nhete dzekanyora inki nokuda kworuoko
Pane zvakawanda zvinoreva kana iwe uchishandisa feather tattoo. Feather tattoo inobatana neusununguko. Isu tinoziva kuti minhenga ndeye shiri neshiri dzinozivikanwa kuti dzakasununguka.
4. Nyeredzi dzinobhururuka dzakatora maitiro ekugadzirisa pfungwa pamaoko emadzimai
Paunenge uine tattoo dzakawanda kana dzisina kuroora, dzinogona kungoti iwe uri kutsvaga rusununguko.
5. Shiri uye feather tattoo design pamusoro pevasikana vakadzoka
Feather tattoo seyizvi haisi kutaura zvekusununguka, inogona kutaura pamusoro pemafungiro. Mafiro ndiwo mapurisa emhepo uye paunenge uchibatanidzwa naro, zvinoreva kuti iwe uri kufunga nezvekuwana chimwe chinhu chikuru kana chakanaka.
6. Chikamu chemuviri feather tattoo pfungwa yevasikana
Zvidhori zvakadai sezvizvi zvinogona kuiswa pane chero chikamu chemuviri. Paunenge uine icho pachikamu ichi chemuviri wako, hachiregi kutarisa zvakanakisisa.
7. Nyeredzi dzinobwinya uye nhete dzekanyori inki kumusana
8. Mhete uye shiri shomanana feather tattoo ink pfungwa nokuda kwesimba remukadzi
Mari yekuwana tattoo iyi ingasave yakadhura sezvaunofunga. Pane zvakawanda zvepaIndaneti mazano apo iwe unogona kuwana tattoo pamutengo unodhura.
9. Nheyo yechipfupa pfungwa yevasikana vakadzoka neshoko
Zvose zvaunofanirwa kuita ndeyokubvunza mibvunzo uye iwe paunenge uchiita, uchakwanisa kuwana zvakanakisisa uye unogona kutengesa mufananidzo anogona kukuwana iwe unhu hwakanaka.
10. Ankle feather tattoo design pfungwa yevakadzi
Ikoko hakuna rusarura pakati pepabonde kana zvichisvika kumatoto akadai. Nzira iyo maitiro akave mafirimu ndeyekuti sei tichiona varume nevakadzi vakagadzirira kuinwa ne #patani sezvizvi.
11. Sleeve feather tattoo ink kuvasikana
Iwe haugoni kuramba kuti kuiswa kwekodha hakusi kunaka. Paunenge uine tattoo sekanakidza saizvi, vanhu vakawanda vanogara vachitarisa.
12. Feather tattoo pfungwa yevakadzi veshe
Kutarisa chic ndiko kuwana tambo yakaisvonaka yakagadzirwa. Hapana kuudza pamusoro pekuti vanhu vari kure vachataura sei kuti zvakanaka sei zviratidzo zvako zvinotarisa kunyange kana iwe usati uripo.
13. Yakazara mapepa feather tattoo design yevakadzi
Ichi ndicho chikonzero vanhu vakawanda vari kushandisa ikozvino vashandi kuti vawane zviratidzo zvinoshamisa zvakadai. Pakupera kwezuva iwe ndiwe unofanirwa kudiwa nevose. image source
14. Cool elbow feather tattoo yevakadzi
Manhenga anongonongedzwa nyore nyore kune chero chikamu chemuviri womunhu, iwo anononoka uye akanaka kuona. Zvimwe zvikamu zvemuviri umo marhenga anoita zvinopisa zvikuru zviri kumativi kumashure, makumbo kana kunyange zvigaro. Iwe haugoni kusvetuka kubva pamubhedha uye unotora feather usingatombozivi chinhu pamusoro payo. image source
15. Shingairira mashizha uye feather tattoo ink nokuda kwevasikana
Mheto dzinobva kune shiri dzakasiyana uye dzinoreva zvinhu zvakasiyana kuvanhu. Zvisinei, mapepa anomirira rusununguko. Tinoona shiri shomanana dzakabatwa mukutapwa apo chikamu chikuru chazvo chinoonekwa ichifamba-famba pasi pose pasina kubvumidzwa. image source
16. Mifananidzo yakawanda inopenya tattoo ink pfungwa nokuda kwechiri musikana
Kana vanhu vachikuona nemapapiro, vatoziva kuti uri kutaura nezvekusununguka kana kutsvaka rusununguko. image source
17. Lovely feather tattoo pfungwa pamusoro pevanhu ruoko
Kushandiswa kwemapapiro emapapiro kunogona kusimbisa zvinhu zvakaita sechinhu. Feather inogona kuratidza unyanzvi, rusununguko rwokutaura, #pfungwa uye zvizhinji zvakawanda zvinosanganisira kutaura. Kana iwe wakatora nhaurirano iwe uchaona kuti kune marudzi akawanda ematenha emapapiro munyika. image source
18. Kuno rumwe rutivi rwechimiro chechimiro pfungwa yevasikana
Iwe unogona kuratidza humwe hwemweya neminhenga uye kune avo vanoita madzishe madzishe, vanogona kushandisa chirevo ichi. image source
19. Mandala uye ankle feather tattoo design yevakadzi
Iwe unofanirwa kuziva kuti mapapiro egondo anomiririra simba uye ushingi, iyo peacock ine madzimambo uye runako uye imwe shiri dzinenge dzine zvarinoreva. image source
20. Feather tattoo pfungwa nokuda kwemaoko
Mhenga haisi huru uye inogona kukodzera chero chikamu chemuviri. Iwe unogona kugadzira zvinhu zvakawanda zvakapoteredza feather yako tattoo. image source
21. Tsanga uye feather ink tattoo kuvarume pazvombo
Kana iwe uchida zvimwe zvinhu zvakadai semasikirwo, mhuka, zvekunamata kana chero chipi zvacho chaungada kuwedzera pane yako feather, zvinoita kuti uite. image source
22. Nyeredzi dzinofamba uye sleeve feather tattoo design yevakadzi
Chinhu chokutanga chatinokurudzira kwauri ndechekugara pasi nekuita tsvakurudzo yako kune shiri nemapapiro. Paunenge wapedza, sarudza feather yako uye usarudze chikamu chemuviri wako chaunoda kuti icho chinyorwa. image source
23. Shoulder feather tattoo pfungwa kuvanhu
Paunofanirwa kunge wakawana ruzivo urwu, unofanirwa kutarisa unyanzvi, uyo achasika iyo feather yakanaka kwauri pamuviri wako. image source
24. Shoulder feather tattoo pfungwa nemashoko, rimwe zuva ini ndichabhururuka kure 'kwevakadzi
Kune nzvimbo dzakawanda iwe unogona kuwana muvepi anonyatsoziva nezita rako. Nhaurirano inokosha zvikuru pakati pako nemuiti wako. Kusanzwisisana kunogona kuguma kukupa pfungwa isina kururama yemhenga iwe unoda kuva nayo. image source
25. Rakawanda ruvara feather tattoo ink nokuda kworuoko
Dzvanya pano kuti uwane mamwe Feather Tattoo Designs
foot tattoostattoos for girlsnjiva tattoosmwedzi tattoosdragon tattoocompass tattoomaoko tattooscouple tattoosrose tattooschifuva tattoostribal tattoossemicolon tattooarm tattooszuva tattooscat tattooshanzvadzi tattoosneck tattoosangel tattoostattoos kuvanhukorona tattooselephant tattoomehndi designinfinity tattooFeather TattooHeart Tattoossleeve tattoosAnchor tattoosflower tattoosAnkle Tattooscross tattoosdiamond tattoocherry blossom tattooSkull tattooseagle tattoosbirds tattoostattoo ideasbutterfly tattooslotus flower tattooarrow tattooPeacock tattoozodiac zviratidzo zviratidzorip tattoostattoo yezisoback tattooscute tattooshenna tattoowatercolor tattooshamwari yakanakisisa tattoosshumba tattoodreamcatcher tattoos